जया बच्चनमाथि खनिइन् कंगना रनौत, भनिन् - 'अभिषेकले पासो लगाएको भेट्नु भएमा के गर्नुहुन्छ ? ' Canada Nepal
जया बच्चनमाथि खनिइन् कंगना रनौत, भनिन् - 'अभिषेकले पासो लगाएको भेट्नु भएमा के गर्नुहुन्छ ? '
काठमाडौँ। बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री कंगना रनौत पछिल्लो समय निकै चर्चामा आइरहेकी छिन् । सुशान्त सिंह राजपुतको प्रकरणमा अभिव्यक्ति दिदै आएकी कंगना पछिल्लो समय भने विभिन्न विवादमा आइरहेकी छिन् ।
सुशान्तको मुद्दामा लागुपदार्थको विषय केही समयदेखि अगाडी आइरहेको छ । ९० प्रतिशत बलिउडका कलाकारहरु लागुपदार्थको सेवन गर्छन् र सबैजना ड्रग पार्टीहरूमा सामिल हुन्छन् भन्ने कंगनाको बयानले बलिउडमा निकै हलचल मच्चायो। तर अहिले कंगना रनौत आफै लागुपदार्थ विवादमा तानिएकी छिन्।
यसैबीच अभिनेत्री कंगना समाज पार्टीकी सांसद तथा अभिनेत्री जया बच्चनमाथि खनिएकी छिन् । जया बच्चनले कसैको नाम नलिइकनै फिल्म इन्डष्ट्रिमा नाम कमाउनेहरुले नै यसलाई नाली भनिरहेको बताएपछि कंगनाले उक्त प्रश्नको जवाफ दिएकी छिन् ।
जया ले भनेकी थिइन् - 'फिल्म इन्डष्ट्रिमा नाम कमाउनेहरुले नै यसलाई नाली भनिरहेका छन् । मलाई आशा छ कि सरकारले यस्ता मानिसहरुलाई यस्ता भाषाको प्रयोग नगर्न भनोस् ।'
यसैको जवाफमा कंगनाले यदि तपाईको छोरा अभिषेक पासो लगाएको भेट्नु भएमा के गर्नुहुन्छ भनी सोधेकी छिन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यदि तपाईको छोरा अभिषेक पासो लगाएको भेट्नु भयो , तपाईको छोरीलाई कुटेको, ड्रग्स दिइएको र युवा अवस्थामा यस्तै शोषण गरेको भए के तपाई यस्तै भन्नुहुन्थ्यो भनि प्रश्न गरेकी छिन् ।
भाद्र ३०, २०७७ मंगलवार २०:२६:१० बजे : प्रकाशित
फिल्म 'योद्धा' मा दिशासँग जोडी बाँध्दै शाहिद
काठमाडौं - कोरोनाभाइरसलाई मध्यनजर गर्दै अहिले बलिउडमा फिल्मी कामहरु धमाधम भइरहेका छन् ।
यस्तै पछिल्लो समय अभिनेता शाहिद कपुरको नयाँ फिल्मको पनि चर्चा छ । फिल्म ‘कबीर सिंह’ हिट भएपछि कुनै फिल्ममा नदेखिएका शाहिद नयाँ फिल्म 'योद्धा' मा देखिदैछन् ।
शंशाक खेतानको निर्देशनमा बन्ने फिल्म 'योद्धा' मा शाहिदसँगै अभिनेत्री दिशा पटानीको अभिनय रहने बताइएको छ । फिल्ममा दिशा र शाहिद जोडी बन्ने बताइएको छ ।
करण जोहरको निर्माण रहेको यस फिल्ममा दमदार एक्सन रहने बताइएको छ । पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसलाई मध्यजनर गर्दै बलिउड फिल्मका छयांकन भइरहेका छन् ।
आश्विन ८, २०७७ बिहिवार २०:३६:२३ बजे : प्रकाशित
पत्नी आलियाले लगाइन् नवाजुद्दीनमाथि यौन दुराचारको आरोप, दिइन् प्रहरीमा उजूरी
काठमाडौं। बितेको केहि महिनादेखी बलिउड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकीको परिवारमा विवादहरु भइरहेको छ ।
पारिवारिक विवादमा फसिरहेका नवाजुद्दीन अहिले मुस्किलमा पर्दै गइरहेका देखिएको छ । भारतिय मिडियाका अनुसार उनीविरुद्ध श्रीमती आलियाले प्रहरीमा उजुरी दिएकी छिन्। श्रीमती आलियाले उनलाई बलात्कार र ठगीको आरोप लगाएकी छिन् ।
उनले नवाजुद्दीनबिरूद्ध मुम्बईको वर्सोवा प्रहरी चौकीमा उजुरी दर्ता गरेको र उनको गुनासोमा प्रहरीले एफआईआर दर्ता गरेको भारतिय मिडियामा बताइएको छ ।
भारतिय मिडिया जी न्युजका अनुसार नवाजुद्दीनबिरूद्ध भारतीय दण्ड विधानको धारा ४२० र ४९३ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको बताइएको छ । यस्तै नवाजुद्दीनसँग सम्बन्धविच्छेदको लागि आलियाले मुद्दा दायर गरिसकेकी छिन् ।
उनले जानी जानी कोहीमाथि चोट पुर्‍याएको र धम्की दिएको पनि आरोप लगाएकी छिन् । आलियाले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि नवाजुद्दीनले आलियाले परिवारमाथि झूटा आरोप लगाएको बताएका छन् ।
आश्विन ८, २०७७ बिहिवार १३:०६:१३ बजे : प्रकाशित
कोरोनाको प्रभाव ठूलो पर्दाबाट सानो पर्दामा ओर्लिँदैछन् चलचित्र
बीबीसी। यो गर्मी याम भारतमा निकै नै असामान्य रह्यो। कोरोनाभाइरस महामारीका कारण मार्चदेखि बन्द भएका चलचित्रघरमा दशौँ लाख फिल्म प्रशंसक भारतीयहरू आफ्ना प्रिय चलचित्र हेर्न जान पाएनन्। तर घरभित्र थुनिएका परिवारहरूका निम्ति अनलाइनमार्फत् मनोरञ्जनका सामग्री पस्किने स्ट्रीमिङ प्ल्याटफर्महरूले यो रिक्तता पूर्ति गर्ने ठूलो प्रयास गरे।
यस अवधिमा आफ्ना नोक्सानी घटाउन कैयौँ चलचित्रहरूले ठूला हलको साटो सानो पर्दामा नै तिनका फिल्म रिलीज गरेका छन्। नेटफ्लिक्स, अमेजनको प्राइम भिडिओ तथा डिस्ने+हटस्टारजस्ता स्ट्रीमिङ सेवा प्ल्याटफर्मका निम्ति बनाइने फिल्म वा सिरिजका निम्ति बलीवुडका हस्तीहरूले एकपछि अर्को चाहना देखाएका छन्। हुन त महामारी अगावैदेखि ठूलो पर्दा र सानो पर्दाको दूरी मेटिने क्रम सुरु भइसकेको थियो। सिनेमाघरका मालिकहरूमा विस्मय जन्माउनेगरी महामारीले पहिल्यैदेखि बिस्तारै हुन थालेको रूपान्तरणलाई तीव्र गति प्रदान गरेको छ।
फलस्वरूप फिल्म पत्रकार असीम छाब्रा भन्छन्, "अहिले आएर बलीवुडले यो रूपान्तरणमा सहभागी हुन दौडिनुपरेको छ, आफूलाई बदल्नु परेको छ र कतिपय मामिलामा त सम्झौता समेत गर्नुपरेको छ।"
जुन महिनामा 'गुलाबो सिताबो' नामक चलचित्र अनलाइनमा रिलीज हुने पहिलो त्यस्तो फिल्म थियो जसमा मुम्बईका सबभन्दा चर्चितमध्येका अभिनेता अमिताभ बच्चनको अभिनय थियो। त्यसपछि भारतीय गणितज्ञ महिलाको जीवनमा आधारित 'शकुन्तला देवी', लडाकु विमान चलाउने महिलाको जीवनबाट प्रभावित 'गुञ्जन सक्सेना' तथा सन् १९९१ को चलचित्रको अर्को भागको रूपमा आएको 'सडक २' फिल्महरू उसैगरी सार्वजनिक भए।
ठूलो पर्दाका निम्ति बनाइएका यी चलचित्रहरूको निम्ति अहिलेको समयमा स्ट्रीमिङ प्ल्याटफर्म एक मात्र विकल्प हुनुका साथै स्वाभाविक विकल्प पनि रह्यो।सेन्सर बोर्डहरूले सम्भावित कैँची चलाउने दृश्य वा सन्दर्भ अनि फरक धारका कथासहितका मनोरञ्जनका सामग्री पस्किएर विशेषतः सहरी तथा युवा समुदायमाझ यस्ता प्ल्याटफर्म लोकप्रिय भइसकेका छन्।
धेरैले के थाहा पाए भने स्ट्रीमिङ भनेको भविष्य होइन, वर्तमान पनि हो," नेटफ्लिक्स इन्डिया कन्टेन्टकी उपाध्यक्ष मोनिका शेर्गिलले भनिन्। बलीवुडको रोजाइको मञ्च अहिले उपलब्ध नभएको अवस्थामा स्ट्रीमिडले कडा प्रतिस्पर्धापनि बेहोरिरहेको छ। नेटफ्लिक्स र अमेजनको प्राइम भिडिओसँग भारतमा सबभन्दा ठूलो बजार हिस्सा रहेको छ। नेटफ्लिक्सले यो वर्ष अहिलेसम्म भारतमा १८ वटा मौलिक प्रस्तुति पस्किसकेको छ भने प्राइमले सन् २०२० भरिमा १४ वटा मौलिक प्रस्तुति पस्किने बताएको छ।
डिस्ने+हटस्टारले जुलाई २४ यता हलमा रिलीज गर्न बनाइएका सातवटा चलचित्र आफ्नो सेवामार्फत् सार्वजनिक गरिने जनाएको छ। यी सेवाले सिनेमा र टेलिभिजनबीचको स्पष्ट खाडल पुर्न सहयोग पुगेको छाब्रा बताउँछन्। "अमेरिकामा यो भिन्नता अस्पष्ट छ। त्यहाँ कतिपय चर्चित हलीवुड कलाकारले सुरुमा टीभीमा अभिनय गरेको पृष्ठभूमि पाइन्छ," उनले भने।
बलीवुडमा त्यस्तो दुर्लभै हुन्छ। यहाँ कलाकार बन्न चाहनेहरू जसको निम्ति बलीवुडमा काम पाउन मुस्किल हुनसक्थ्यो - उनीहरूका निम्ति स्ट्रीमिङ प्ल्याटफर्मले राम्रो अवसर दिएका छन्। पछिल्लो समयमा त नेटफ्लिक्स तथा अमेजनले भारतीय सिनेउद्योगका हस्तीहरूलाई समेत आकर्षित गर्न थालेको छ।
सानो पर्दा नै ठूलो पर्दा
महिनौँको चर्चापश्चात् बलीवुडमा निकै आम्दानी गर्ने अभिनेता अक्षय कुमारले उनको डर र हास्यरस मिश्रित कथानक चलचित्र 'लक्ष्मी बम' लाई डिस्ने+हटस्टार मा रिलीज गर्ने घोषणा गरे। आगामी वर्ष उनले सो स्ट्रीमिङ सेवाको निम्ति वेबसिरीजमा पनि अभिनय गर्ने बताइएको छ। "केही वर्षअगाडिसम्म अक्षय कुमारलाई स्ट्रीमिङ प्ल्याटफर्ममा देखिनु एउटा अकल्पनीय विषय थियो," छाब्रा भन्छन्।
एबन्डन्टीया इन्टर्टेनमन्ट नामक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी विक्रम मल्होत्रा यी परिवर्तनलाई निकै अद्भुत मान्छन्। केही वर्षअगाडि उनको स्टुडिओले स्ट्रीमिङ सेवाका निम्ति सामग्री बनाउने कुरा गर्दा धेरैले आश्चर्य मानेका थिए।
"त्यतिखेर हाम्रो निर्णयलाई अभिनेता वा निर्देशकहरूको निम्ति एक कदम पछाडि सरेको रूपमा हेरिएको थियो। उनीहरूले स्ट्रीमिङ भनेको ठूला फिल्ममा काम नपाएकाको निम्ति भन्ने ठान्थे," उनी बताउँछन्।
तर उनले प्रारम्भिक चरणमै देखाएको विश्वासले अहिले नतिजा दिएको छ। महामारीकै माझ उनको स्टुडिओले दुईवटा सामग्री रिलीज गर्‍यो जसमध्ये एउटा 'ब्रेथ: इन्टु द स्याडोज' मा बलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चनले पनि खेलेका छन्।
"आखिरमा एउटा अभिनेताको रूपमा तपाईँले आफ्नो आगामी काम र भन्नै पर्ने कथाबारे सोच्नुहुन्छ," अभिषेक बच्चनले बीबीसीलाई बताएका थिए। "मलाई लाग्छ यो (स्ट्रीमिङ) रोमाञ्चक माध्यम हो र यो अब हराउनेछैन।"
मूलधारका अन्य अभिनेताहरूले पनि हालसालै अनलाइन सामग्रीमा खेलेका छन् वा चाँडै खेल्दैछन्। सो सूचीमा अनिल कपुर, नसिरुद्दीन शाह, शबाना आज्मीदेखि काजोल र करिश्मा कपुर पनि छन्।
"आगामी महिनाहरूमा अझ धेरै बलीवुड कलाकारहरूले स्ट्रीमिङ सेवा अँगालेको देखिनेछ," भारतको सबभन्दा ठूला स्टुडिओमध्येको धर्मा प्रोडक्शन्सका प्रमुख कार्यकारी अपूर्वा मेहताले भने।
तर स्ट्रिमिङको भविष्य आशालाग्दो देखिएपनि सिनेमाहरूको भविष्य अनिश्चयपूर्ण बनेको छ।
"सिनेमाहरूले सबभन्दा ठूलो धक्का बेहोरेका छन् - हामी सबभन्दा पहिले बन्द हुनेमा पर्‍यौँ र अब सबभन्दा पछि खुल्नेमा पर्नेछौँ," इनक्स मल्टिप्लेक्स सिनेमा हलका प्रमुख कार्यकारी आलोक टण्डनले बताए।
सिनेमा हल मालिकहरूले हालै भारतका धेरै पढिने पत्रिकाहरूमा पूर्ण पृष्ठको विज्ञापन जारी गर्दै उनीहरूलाई खोल्न दिन आग्रह गरेका थिए। गत छ महिनामा यो उद्योगले करिब सवा अर्ब डलरको घाटा बेहोरेको उनीहरूले बताए।
तर मालिकहरूले तिनका हलको ढोका खुलेपछि के होला भन्नेबारे पनि चिन्ता प्रकट गरेका छन्। एउटा कारण त के पनि हो भने हलमा रिलीज गर्न बनाइएका कैयौँ चलचित्रहरू अब स्ट्रीमिङ प्ल्याटफर्मको हातमा पुगिसके।
दोस्रो कारण चाहिँ सामाजिक दूरीको मापदण्डका कारण हलमा खचाखच दर्शक राख्न सकिनेछैन। साथै अचानक कतै हलका कारण सङ्क्रमण फैलिएको पाइए उनीहरूले तत्काल बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। समीक्षक साइबल च्याटर्जी भन्छन् - सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भने जब चलचित्रहरू हलमा फर्किनेछन् त्यतिखेरसम्म बलिवुडको मुहार नै फेरिइसकेको हुनेछ।
"बलीवुडमा अहिलेनै कडिकडाउ हुन थालिसक्यो। कथाहरू बदलिनेछन्, गजब-गजबका ठाउँमा गएर छायाङ्कन गरिनेछैन। अनि हस्ती वा सुपरस्टारहरूले पनि साविकभन्दा थोरै पारिश्रमिक स्वीकार्नुपर्नेछ," च्याटर्जीले भने।
उनका अनुसार यो प्रवृत्ति सन् २०२३ सम्म लम्बिन सक्ने भएकाले उद्योगमा गम्भीर प्रभाव पर्नेछ। "तपाईँले सिनेमा पनि स्ट्रीमिङ् सेवाका सामग्रीजस्तै बनेको पाउनुहुनेछ। व्यापार जोगाउन यसो हुनेछ," उनले भने। यसबीच यो वर्षको दुईवटा ठूला बजेटका बलीवुड चलचित्र अझै रिलीज भएका छैनन्। ती मार्च र एप्रिलमा आउनुपर्थ्यो।
एक्शन प्रधान चलचित्र 'सूर्यवंशी' तथा भारतले सन् १९८३ मा विश्वकप क्रिकेट जितेको सन्दर्भमा बनाइएको '८३' नामक चलचित्रहरूमा चर्चित अभिनेता-अभिनेत्रीहरू छन्। तिनले भिडलाई हलमा डाकेर उद्योगको व्यवसाय चम्काउने आशा गरिएको छ। त्यसैले अझसम्म सिनेमा मालिकहरूले हरेस खाइसकेका छैनन्। "एउटा गतिलो ब्लकबस्टर (अत्यन्त सफल चलचित्र)ले कथा बदल्दिनेछ," टण्डनले भने।
आश्विन ७, २०७७ बुधवार १५:०१:५१ बजे : प्रकाशित
# कोरोनाको प्रभाव
# ठूलो पर्दा
# सानो पर्दा
अभिनेता टाइगर श्राफ‌‌ गायक बने, पहिलो गीत सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौं - बलिउडका एक्सन स्टार हुन् टाइगर श्राफ‌‌ । धेरैजसो नयाँ फिल्मका कारण चर्चामा आइरहने टाइगर बलिउडका सफल अभिनेतामा पर्छन् ।
फिल्ममा अभिनयबाटै धेरै दर्शकको मन जितेका टाइगर अब गायक भएका छन् । बलिउडमा एक्सन स्टारको नाकले परिचित उनी अब गायकको नामले पनि चिनिएका छन् । उनले हालै आफ्नो पहिलो गीत सार्वजनिक गरेका छन् ।
टाइगर श्राफले स्वर दिएको गीत सार्वजनिक भएको छ । सोमबार उनको सुमधुर स्वरमा 'अनबिलिवेबल' बोलको गीत युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । गीतको भिडियोमा उनी पनि देखिएका छन् ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म यस भिडियोलाई ५२ लाख ३३ हजार भन्दा बढी पटक हेरिसकिएको छ । पुनित मल्होत्राले निर्देशन गरेको यस भिडियोलाई शक्तिले सम्पादन गरेका हुन् ।
आश्विन ७, २०७७ बुधवार १४:३९:३१ बजे : प्रकाशित
# टाइगर श्राफ
विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा परे आयुष्मान
काठमाडौं - बलिउडका चर्चित अभिनेता तथा गायक हुन् आयुष्मान खुराना । सन् २०१२ मा फिल्म ुविकी डोनरु बाट फिल्मी यात्रा शुरु गरेका आयुष्मानले हालसम्म धेरै फिल्ममा अभिनय गरिसकेर चर्चामा आइरहेका छन् ।
उनका हरेक फिल्महरु दर्शकले रुचाइरहेका छन् । सबैका प्रिय अभिनेता आयुष्मान बर्ष २०२० को विश्वमा सय प्रभावशाली व्यक्तिमा परेका छन् ।
आफु विश्‍वकै सय प्रभावशाली व्यक्ति’को सूचीमा परेको बारे आयुष्मानले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममार्फत जानकारी गराएका छन् । उनले इन्स्टाग्राममा लेखेका छन्,“टाइम्सको विश्वका १०० सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तिको सूची सार्वजनिक भैसकेको छ, यो सूचीमा म पर्न सफल भएकोमा गर्व महसुस गरिरहेको छु ।”
उनले टाइम्सले आफुलाई प्रदान गरेको सम्मानप्रति कृतज्ञ रहेको बताएका छन् । टाइम्सको यस सूचीमा भारतबाट अज्य ४ जना व्यक्ति पनि परिसकेका छन् । यस सूचीमा पर्ने भारतिय कलाकारमा आयुष्मान एक मात्र हुन् ।
यसअघि पनि आयुष्मान सन् २०१३ र २०१९ मा 'फोर्ब्स इन्डिया' को सेलिब्रिटी १०० सूचीमा परेका थिए । त्यस्तै उनले सर्वश्रेष्ठ अभिनेताको लागि राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार पनि पाएका थिए ।
आश्विन ७, २०७७ बुधवार १२:४२:०७ बजे : प्रकाशित
हनिमुन गएकी पूनम पाण्डेले श्रीमान् लाई पुलिस चौकीमा थुनाइन्
काठमाडौं। बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री तथा मोडल हुन् पूनम पाण्डे । धेरैजसो बोल्ड तस्बिरका कारण चर्चामा आउने पूनमको वैबाहिक जीवन अहिले धरापमा परेको छ । १२ दिनअघि ब्वाइफ्रेण्ड साम बाम्बेसँग विवाह गरेकी पूनमले पतिविरुद्ध नै प्रहरीमा उजुरी दिएकी छिन् ।
एक फिल्मको सुटिङ र हनिमुनको लागि गोवा गएकी पूनमले पतिलाई कुटपिट गरेको आरोप लगाएकी हुन् । उनले स्यामविरुद्ध उत्पीडन र कुटपिटको मुद्दा दर्ता गरे लगत्तै गोवा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ ।
पूनमको उजुरीमा स्यामलाई गोवा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ । भारतिय मिडियाका अनुसार पत्निलाई कुटपिट गरेको आरोप लागेका सामको अब मेडिकल जाँच गरिने र अदालतमा उपस्थित गराइने बताइएको छ ।
१२ दिन अघि पूनमले सामाजिक सञ्जालमा पतिसँगको तस्विर सेयर गर्दै लेखेकी थिइन्, ‘तिमीसँग सात जन्म बिताउने आशामा ।’
आश्विन ७, २०७७ बुधवार ११:३८:४२ बजे : प्रकाशित
# पूनम पाण्डे